Iilwimi ezininzi ze-COVID-19 IiVidiyo zoLwazi - iAfrArAriv
Kukho ulwazi oluninzi olujikelezayo nge-COVID-19 -luthembeke ngakumbi kunabanye. Kubantu abaninzi, kuyanoxinzelelo ukuhlela imiyalezo eyahlukileyo- rhoqo kwiilwimi ezingezizo iilwimi zabo zenkobe.
Siceba ukujongana noku ngemiyalezo emifutshane, engaguquguqukiyo enikezwe kwiilwimi ezininzi zengingqi / zasekhaya. Ukuze ufumane oko, sifuna uncedo lwabaphandi kunye nabanye oonxibelelwano.
Injongo yethu kukudala iividiyo zemizuzu emi-2 ngeelwimi ezininzi kangangoko sinokuthi sinike umyalezo ongaguqukiyo malunga ne-COVID-19, izicwangciso zokuqulatha ulwazi kunye nengcaciso yezempilo esebenzayo.
IsiSepedi [Mzantsi Afrika]
Ndifuna ukukhuthaza wonke umntu olwela amalungelo obuhlanga ukuba enze le COVID 19 yolwazi kunye neevidiyo zokwazisa okanye ukurekhodwa kwamazwi kulwazi lwabantu babo malunga nobhubhane. Sivuyisana noJonathan Sena nabahlobo ngeli nyathelo lokwazisa abantu abangamaMasai.
Kuthunyelwe ngu I-IPACC-Ikomiti yoLungelelaniso yaBantu baseAfrika ngolwesiHlanu, ngo-Epreli 24, 2020
Uluhlu lokudlala feat. Gbagyi, Yoruba, Igbo, I-Efik, Urhobo, Hausa & Iimpawu zolwimi [Nayijeriya]
Indlela yokufaka isandla
Jonga amanqaku okuthetha angezantsi
Abaguqulele kulwimi lwasekhaya
Yongeza umbuliso, intetho eyakhayo, isiqinisekiso sokuba isenzo ngasinye singenza umohluko
Yenza ifilimu ngokwakho uhambisa lo myalezo. Cwangcisa ukuya kuthi ga kwimizuzu emi-3 (ubungakanani befayile> 600MB)
Faka iileyibhile ngale ndlela ilandelayo: I-COVID_Introduction_LANGUAGE_COUNTRY_dd-mm-2020
Ngenisa ividiyo yakho kwi-YouTube kwaye ugcwalise le fomu kaGoogle: https://tinyurl.com/COVID19-video-submission.
Sisebenzisa ulwazi olusuka kwiFomu likaGoogle siya kuthi silungiselele uluhlu lweevidiyo kwiwebhusayithi yokuFikelela yesi-2 apha https://access2perspectives.com/covid-19.
Siza kuphinda sikhuphe iividiyo ezintsha, sikhuphe i-YouTube2 channel kwaye wabelane nge-Facebook. Siza kungenisa usasazo kwiwebhusayithi ye-Access2Perspecadors.
TwitterThumela ividiyo yakho kubahlobo nosapho, malunga nayo, yabelane ngayo nabaququzeleli boluntu (iicawe, izikolo, iinethiwekhi zentlalo). Nceda usiphawule @NtsikeleloCanga kwaye usebenzise i-hashtag # COVID19video
Naziphi na iingxaki, imibuzo okanye iinkxalabo, i-imeyile: info@access2perspectives.com
Sifuna ukuqinisekisa ukuba iividiyo kwabelwana ngazo ngokubanzi ngokusemandleni. Senza akukho sithintelo ekusasazeni iividiyo. Ukuqinisekisa ukuba siziphethe kakuhle sicebisa ukuba konke ukwabiwa kulawulwe yiCreative Commons cc-ilayisensi (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
Zazise- usukaphi, wenza ntoni?
Molo, igama lam livela (kwisixeko, ilizwe)
I-Coronaviruses liqela leentsholongwane ezinxulumene nazo ezibangela ukugula okuphefumlayo ebantwini.
Uninzi lwezifo ezibangelwa zi-coronavirus zithambile kodwa zinokuba nzima ngakumbi.
Kutshanje isigulo esitsha esibangelwe yi-coronavirus, i-COVID-19, sichongiwe kwaye sisasazeke ngokukhawuleza kwihlabathi liphela.
I-COVID-19 sisifo esichongiweyo esitsha esibangelwe yi-SARS-CoV-2 coronavirus.
Kwaqatshelwa okokuqala kwizigulana ngasekupheleni konyaka ka-2019 eWuhan, kwiphondo laseHubei kumbindi China.
Olu xinzelelo lwe-coronavirus luhambisa ngokulula phakathi kwabantu kwaye luye lwanda ngokukhawuleza ukusukela.
I-COVID-19 ngoku iye yanikelwa ingxelo kumazwe angaphezu kwe-150 kwihlabathi liphela ne-China, i-Italiya, i-US, iSpain kunye neJamani ngoku ezichaphazeleke kakubi.
Umbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) ubhengeze ukuba kuqhambuke ubhubhane ka-2019 ukuya ku-20 ka -2020 ka-Matshi ka-XNUMX.
Ezona mpawu ziqhelekileyo ze-COVID-19 ngumkhuhlane, ukudinwa kunye nokukhohlela okomileyo.
Iimpawu zihlala zithambile kwaye ziqala kancinci, zihlala iiveki ezimbini.
Uninzi lwabantu luyaphola kwesi sifo ngaphandle kokufuna unyango olukhethekileyo.
Iimpawu ezinobunzima zesifo zibandakanya ukuphefumla ingxaki, isifuba esiqinileyo, isiphithiphithi kunye nemilebe ebluhlaza okanye ubuso.
Amaqela athile abantu asengozini enkulu yezifo ezinzima, kubandakanya, abantu abadala, kunye nabaneimeko zonyango ezazibakhona ngaphambili kubandakanya uxinzelelo lwegazi, iingxaki zentliziyo okanye isifo seswekile.
Ngaba ungosulela abanye abantu kuphela ukuba ngaba ubonakalisa iimpawu ze-coronavirus?
Abanye abantu bafumana iimpawu ezinobuthathaka kakhulu kwaye banokungaziguli njengezigula.
Nangona kunjalo, abantu kwasekuqaleni kusulelo abaneempawu ezibuthathaka kakhulu kufunyenwe ukuba banamazinga aphezulu entsholongwane kwaye banokosulela abanye abantu.
Nje ukuba kuvela iimpawu, kubalulekile ukuqala unciphise unxibelelwano lwentlalo kunye 'nokuzihlukanisa' ukuze unciphise umngcipheko wokusasaza intsholongwane phambili.
Ubungqina bucebisa ukuba isifo esithambileyo, esineempawu ezimbalwa, siqhelekile ebantwaneni. Iimeko zabantu abadala zokudlulisela i-COVID-19 ngaphandle kokubonisa naziphi na iimpawu zesi sifo ziye zachaphazeleka, nangona akucaci ukuba iqheleke kangakanani loo nto.
Yintoni ekufuneka uyenze ukuze uphephe?
Ukuze uzikhusele, kubalulekile ukuba uhlambe izandla zakho ngesepha namanzi ngokucocekileyo kwaye rhoqo, ngakumbi emva kokuba uphume esidlangalaleni.
Iiglasi zotywala zinokusetyenziswa njengenye indlela.
Kubalulekile ukukuphepha ukuchukumisa amehlo, impumlo kunye nomlomo wezandla ezingafakwanga.
Ukuba i-COVID-19 isasazeka kwindawo yakho, kubalulekile ukubeka umgama phakathi kwakho namanye amalungu oluntu.
Gcina abanye bekhuselekile ukuba uneempawu
Emva kokunxibelelana nale ntsholongwane, iimpawu zingavela kwiintsuku ezili-14 kamva.
Ukuba ucinga ukuba ukhe waveza umntu onokuba unayo intsholongwane okanye uqalisa ukukhula, kubalulekile ukuba 'uzimele yedwa' kwiintsuku ezili-14 ukunqanda ukosulela isifo.
Hlala ekhaya ukuba uyagula okanye amanye amalungu osapho lwakho ayagula.
Buza usapho, izihlobo okanye abamelwane ukuba banokwazi ukukuhlisela ukutya kwaye uphephe izithuthi zikawonkewonke.
Ukuba kufuneka uphume endlwini, kufuneka unxibe i-facemask, kwaye uqiniseke ukuba uyawugquma umlomo wakho kunye neempumlo ngethisisi xa ukhohlela okanye uthimla.
Kwimimandla emininzi echatshazelwe yile ntsholongwane, 'ukusasazeka kwabantu' kuyafuneka ukuthintela ukusasazeka kwentsholongwane.
Kukuthini ukuphuma koluntu?
Kwimimandla echaphazeleke kakubi, abantu bayacelwa ukuba basebenzise amanyathelo 'okuncitshiswa kwentlalo'.
Oku kubandakanya ukunciphisa inani labafowunelwa abantu imini yonke ukuze banciphise inani lothumelo.
Abantu abaninzi bayakhuthazeka ukuba basebenze ukusuka ekhaya kwaye baphephe izithuthi zikawonkewonke ukuba kunokwenzeka.
Ukudibana nabahlobo kunye nosapho (kubandakanya imitshato kunye neekrisimesi) ziyadimazeka.
Abantu abathathelwa ingqalelo kumngcipheko wokosuleleka kakhulu bayacelwa ukuba balandele imithetho engqongqo kunamanye amalungu oluntu.
Kubalulekile ngeli xesha ukucinga ngabantu abasesichengeni ekuhlaleni kwaye ujonge impilo yengqondo yomntu wonke.
Uluntu sele luseka amaqela onxibelelwano, oko kuthetha ukuba abantu banokucela uncedo kubamelwane babo ukuba bayadingeka.
Ukuba kufuneka uhlale ekhaya, kubalulekile ukuqhubeka nokuzivocavoca, ukutya ukutya okusempilweni nokuhlala usebenze.
Iintsapho ezininzi kunye nabahlobo bagcina unxibelelwano besebenzisa itekhnoloji ekude njengeefowuni, i-intanethi, kunye nemithombo yeendaba zentlalo.
Kutheni le nto ukuhambela kude nolawulo lokuhamba lusenziwa ngoorhulumente?
Le migaqo-nkqubo yenzelwe ukunciphisa inani lokunxibelelana nabantu, kwenze ukuba kube nzima ukuba intsholongwane isasazeke ebantwini.
Ngokwenza oku, sinethemba lokuba izibhedlele kunye nezixhobo zonyango kwimimandla echaphazelekayo aziyi kuba ngaphezulu, kwaye zinokubonelela ngonyango lwamatyala amaninzi kangangoko kunokwenzeka.
Oorhulumente abaninzi bayayekisa iindibano ezinkulu, ezinjengeekonsathi kunye nemidlalo.
Ezinye iindawo ezitsala izihlwele, ezinje ngeevenkile ezingabalulekanga, iindawo zokuzilolonga neendawo zokutyela zinokucelwa ukuba zivaliwe.
Izikolo neeyunivesithi zisenokuba zivaliwe ngokunjalo.
Amazwe amaninzi anyanzelisa uthintelo lokuhamba, anciphise ukuba ngubani onokungena ashiye amazwe.
Indawo ekubhekiswa kuyo ukufumana izikhokelo zelizwe elithile
Yintoni esinokuyilindela kwiinyanga ezizayo?
Esi sisifo esitsha, ekusafuneka sifunde kakhulu ngaso.
Ngelixa kwamanye amazwe ukusasazeka kwesi sifo kubonakala kucotha, kwamanye amazwe amaninzi sibona okuchaseneyo.
Yimeko etshintsha ngokukhawuleza, kwaye kubalulekile ukuba abantu bahlale benolwazi olukhokelwayo ngoorhulumente babo.
Izixhobo ze-WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Amaziko oLawulo lweSifo kunye noThintelo. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
I-AfricArXiv COVID-19 Q&A kwiilwimi zaseAfrika zommandla: https://info.africarxiv.org/qa-around-covid-19-in-regional-african-languages/
Isicatshulwa esinikezwe ngu
UAnna McNaughton, IYunivesithi yase-Oxford, i-ORCID iD: 0000-0002-7436-8727, KuTwitter: @AnnaLMcNaughton
Louise Bezuidenhout, IYunivesithi yase-Oxford, i-ORCID iD: 0000-0003-4328-3963, KuTwitter: @loubezuidenhout
UJohanna Hadmann, I-Access2Perspecatives, i-ORCID iD: 0000-0002-6157-1494, KuTwitter: @johave
Lo mbhalo kunye nazo zonke iividiyo ziphantsi CC-BY-SA 4.0 ilayisensi
Chaza njengo: Bezuidenhout, Louise, McNaughton, Anna, & Havemann, Johanna. (2020, Matshi 26). IiVidiyo eziNika ulwazi ze-COVID-19 zeLwimi ezininzi. UZenodo. doi.org/10.5281 /